သုတ ရသ နည်းပညာ - မှတ်စု: January 2015
OPPO Find Piano R8113 Offical Firmware
OPPO Find Piano R8113 အတွက် offical firmware ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Posted by A Yan Lu at 7:18 AM 1 comment:
Labels: Firmwares, OPPO FIRMWARES
MIUI ROM FOR G730-C00
G730-C00 အတွက် MIUI ROM လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
MIUI ROM တွေကတော့ error ဆိုတာမရှိသလောက်ကင်းပါတယ်
CUSTOM ROM ဖြစ်တဲ့အတွက် CWM အရင်သွင်းထားဖို့တော့လိုပါတယ် CWM သွင်းနည်းမသိသေးသူများ ဒီမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်
Posted by A Yan Lu at 6:25 AM No comments:
Labels: CUSTOM ROM, Firmwares, HUAWEI FIRMWARES
G730 C00 ကို CWM သွင်းနည်း
အရင်ဆုံးအောက်မှာ bootloader unlock သွားလုပ်ပေးပါ။
အဲဒီရလာတဲ့ unlock code (16)လုံးကို အစ်ကိုတို့အနေနဲ့ အဆင်ပြေသလို unlock လုပ်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ adb နဲ့ fastboot ၀င်ပြီး unlock လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အာ့ဆိုရင် CWM သွင်းလို့ရပါပြီ။ လွယ်တာဗျာ ခိခိ။ CWM ကိုဒီမှာဒေါင်းပါဗျာ
root လုပ်ထားတဲ့အစ်ကိုများကတော့ official ပြန်တင်ပြီးမှသာ unlock လုပ်ပါ။ root လုပ်ထားရင် unlock လုပ်လို့မရပါဘူးဗျာ။ နောက်တစ်ခုက unlock မလုပ်ဘဲ CWM တန်းသွင်းမိရင်တော့ image signature verify fail ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်။
CREDIT >>> Happy Bobo
Posted by A Yan Lu at 4:09 AM No comments:
USB DEBUGGING ON ထားစရာမလိုဘဲ ဖုန်းမှ PATTERN LOCK များကိုဖြုတ်နိုင်သော TOOL
USB Debugging On ထားစရာမလိုဘဲ ဖုန်းမှ Pattern Lock များကိုဖြုတ်နိုင်သော Tool လေးပါ... ဒီ Tool လေးကိုရေးသား ဖန်တီးသူကတော့ ကို Psychist Naing Lynn ဖြစ်ပါတယ်။ Samsung Ace,Huawei y511, g520 g525 auxv920 နဲ့ Huawei တော်တော်များများမှာစမ်းသပ်အောင်မြင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျန်တဲ့ဖုန်းတော်တ်ာများများမှာလည်းအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
Posted by A Yan Lu at 4:02 AM No comments:
S5 ROM FOR C8816
Huawei C8816 သမားတွေအတွက် S5 ROM တင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုချင်တဲ့သူများအောက်ပါလင့်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါခင်ဗျာ
ဒေါင်းရအဆင်ပြေစေရန်အတွက် mediafire ကနေ upload တင်ပေးထားပါတယ်
CUSTOM ROM ဖြစ်တဲ့အတွက် CWM အရင်သွင်းပြီးမှ ROM INSTALL ပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Posted by A Yan Lu at 6:41 AM 1 comment:
OPPO R1001 အတွက်မြန်မာစာပါပြီးသား offical firmware ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
downloaded firmware stored in the phone to save, turn off the phone
, the phone is completely shut down, while holding down the volume down and power key until the following screen appears, release the button press the volume keys to move the power button to select respectively Clear data / restore factory settings "and" clear cache "(This step can be skipped, but recommended Shuangqing)
select "manually select the installation package, find the firmware, press the power button to confirm to ~
Posted by A Yan Lu at 4:07 AM2comments:
Labels: OPPO FIRMWARES
Asus Fonepad7FE170CG (K012) ROOT လုပ်နည်း
Asus K012 ကို ROOT ..လုပ် နည်းမှာ... အရင်ဆုံး ( ROOT) လုပ်မည့် ဖုန်း မှာ ( ဘက်ထရီ ၇၀% ) အောက် မနဲ စေရပါဘူး....နောက်တစ်ခု...( USB debugging 0n ) ကို အမှတ် ခြစ်ထားရပါမယ်...တကယ်လို့ ...( USB debugging 0n အမှတ် ခြစ်ဖို့ ( Developer Options ) ကို
ရှာမတွေ့ ရင်...Settings >>About >>Software Information>>ကို Build Number 5x 7x. ချက်တိတိ နှိပ်ပေးပါ...ပြီးရင် ( Back ခလုပ် ပြန် ထွက်ပါ...( Setiings >>Developer Options >> ကိုနှိပ်ပြီး...( USB Debugging ၀n ) အမှတ်ခြစ်ပေးပါ..
အား လုံး ( OK ) ပြီဆိုရင်..စလို့ ရပါပြီ.. လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်လေးတွေ အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါ>>>>>>>
1. Driver ADB+Fastboot. Download ဒီမှာယူပါ
2. Driver intel untuk Asus Fonepad. Download ဒီမှာယူပါ
3. Root Genius. Download ဒီမှာယူပါ
4. Mod Super User. Download ဒီမှာယူပါ
အရင်ဆုံး ( Driver intel ) ဖိုင်လေးထဲက ( Driver ) လေးကို ကွန်ပျူတာမှာ (Run ) ပေးလိုက်ပါ...
Root Genius. ကိုထပ်ဖွင့်ပါ.....Driver ADB+Fastboot ကိုဖွင့်ပြီး အပြာရောင်
ဘောက်ကလေးတစ်ခု တက်လာ ရင် ... fastboot Mode ၀င်ပြီး ( Root Genius ) နဲ့ ချိတ်ဆက်
ပေးမှ သာ ( ROOT ) လုပ်နည်း စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်..
..... အဲ့လိုဘောက်ကလေးတက်လာပြီ ဆိုရင် (Mod Super User Zip ) ကို ဖိုင်မဖြည် ပဲ
SD ကပ် အလွတ် ထဲ ထည့်ပြီး ဖုန်းထဲ မှာ ပြန်ထည့်ထားပါ ....အပြာရောင် ဘောက်ကလေး နဲ့ ဖုန်း ချိတ်ဆက်ပြီ ဆိုရင် ( ကီးဘုတ် မှ ( Enter ) တစ်ချက်ခေါက်ပေးပါ......
လုပ်ဆောင်ချက် အားလုံးပြီးပြီ ဆိုရင် ( Reboot ) ကြသွားပါမယ်
ပြန်တက်လာပြီဆိုရင် ( Root Genius ) နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ...
စတင်နေပါပြီ....စောင့်ပါ.......... ( 100% ) အထိ
ဒီအခြေနေ မှာတော့ ...( ROOT ) လုပ်နည်း ပြီးဆုံးပါပြီ..
( Root Checker apk ) လေး နဲ့ စမ်းကျိ ပါ ..
ဒီအဆင့် မှာ ပဲ ( Root လုပ်နည်း ပြီးဆုံးပါပြီ...ဖုန်း အခြေနေ ကွန်ပျူတာ အခြေနေ
မတူညီမှု့ ကြောင့် အဆင်မပြေ မှု့ ရှိပါက ..နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေး နိူင်ကြပါစေ...
အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ >>> အရံလူ
Posted by A Yan Lu at 4:47 AM No comments:
မင်္ဂလာပါ ဒါလေးကတော့Android 2.3 stock Lenovo A238T smartphone firmware လေးပါ အောက်မှာ version အသေးစိတ်ကြည့်ပြီး လိုအပ်တဲ့ဘော်ဘော်တွေ ဒေါင်းသွားပါဗျာ
Credit To မောင်စေတနာ
Posted by A Yan Lu at 4:40 AM No comments:
AIS တံဆိပ်ကပ်နောက်ထပ်အသစ်ထွက်လာတဲ့ LAVA IRIS 700 ဖုန်းတွေကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် firmware ပြန်တင်ချင်ကြတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက် တာချီလိတ်က ကိုနေအောင်ကြီး backup ဆွဲထုတ်ပြီးပြန်တင်ပေးထားတာပါ လိုအပ်သူများအောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါ
AIS LAVA IRIS 700 FIRMWARE
Firmware တင်နည်းကတော့ SP Flash Tool နဲ့တင်နေကြအတိုင်းပါပဲ မသိသေးသူများအောက်ပါလင့်မှာလေ့လာလိုက်ပါ
Credit >>> Original Uploader
Posted by A Yan Lu at 3:34 AM No comments:
အခုတင်ပေးမှာကတော့ SP Flash Tool ရဲ့နောက်ထွက် verison ဖြစ်တဲ့ 5.1 နဲ့ Firmware တင်နည်းဖြစ်ပါတယ် တင်ပုံတင်နည်းကတော့ အရင် version အတိုင်းပါဘဲ့ ပုံစံလေးကွာသွားတာလောက်ပါဘဲ့ အောက်မှာ SP Flash Tool 5.1 Download ကို ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ဖိုင်ကို WinRAR နဲ့ဖြေလိုက်ပါ password တောင်းရင်တော့ www.minminchit.org လို့ထည့်ပေးလိုက်ပါ ရလာတဲ့ဖိုင်ထဲကနေ အောက်ကပုံမှာ အနီရောင်းလေးနဲ့ဝိုင်းပြထားတဲ့ flash tool ကို နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါ
အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာလိမ့်မယ် ပေါ်လာတဲ့ Tool ထဲမှာအနီရောင်ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာက
Scatter-loading ပေါ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီး တင်မယ့် Firmware ဖိုင်ထားထားတဲ့နေရာကိုသွားပါ
တင်မယ့် Firmware ဖိုင်ထဲက အောက်ကပုံမှအနီရောင်ဝိုင်းထားတဲ့ဖိုင်မျိုးလိုက်ရှာပါ ( MT နံပါတ်တော့လွဲသည် ) ပြီးရင် Open ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာရင်တော့ ပုံမှာအနီရောင်ဝိုင်းထားတဲ့နေရာက Download ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
အပေါ်ကပုံအတိုင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ် Firmware တင်မဲ့ဖုန်းကိုအရင်ဆုံး ဖုန်းကိုပိတ်ပြီး Battery ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ ပြီးရင် USB ကြိုးထိုးပြီးကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် Battery ပြန်တပ်ပေးလိုက်ပါ ပါဝါမဖွင့်ပါနှင့် ကွန်ပျူတာကဖုန်းကို သိပြီဆိုရင်အပေါ်က downloand ကိုနှိပ်ပြီးထားလိုက်ပါ ခဏနေအောက်နားမှာရာခိုင်နှုန်းတက်လာပါမယ် အောက်ဆုံးကပုံလို 100% ပြည့်သွားပြီး အစိမ်းရောင်အဝိုင်းလေးနဲ့ အမှတ်ချက်လေးပေါ်လာရင် USB ကြိုးကိုဖြုတ်ပြီး Battery ကိုပါဖြုတ်လိုက်ပါ ပြီးရင် Battery ပြန်တပ်ပြီး Power ဖွင့်လိုက်ပါ Firmware တက်ဖို့နည်းနည်းစောင့်ရပါတယ် ဒါဆိုရင် Firmware တင်လို့ပြီးပါပါပြီ နားမလည်တာရှိရင် ဒီfacebook.comမှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
Credit >>> www.minminchit.org
Posted by A Yan Lu at 3:31 AM2comments:
Ubuntu 14.04.01 ( 32 Bit ) LINUX
LINUX ချစ်သူတွေအတွက် လူသုံးများတဲ့ LINUX တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ubuntu 14.04.01 (32 Bit) ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Offical Site ရဲ့မူရင်းလင့်အတိုင်းပြန်တင်ပေးထားတာပါ
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ ISO ဖိုင်ကို DVD မှာ Bootable Image အဖြစ် burn ပြီး LINUX တင်နိုင်ပါတယ်
Posted by A Yan Lu at 4:56 AM No comments:
Ubuntu 14.04.01 ( 64 Bit ) LINUX
LINUX ချစ်သူတွေအတွက် လူသုံးများတဲ့ LINUX တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ubuntu 14.04.01 (64 Bit) ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Posted by A Yan Lu at 4:29 AM No comments:
ဒီ​နေ့ကျွန်​​တော်​တင်​​ပေးသွားမှာက​တော့ Huawei က​နေသိပ်​မကြာ​သေးခင်​ကမှ ​ဈေးကွက်​ထဲစတင်​​ရောက်​လာပြီး ​ဈေးနှုန်းလည်းအသင့်​အတင့်​ရှိလို့ လူသုံးများစပြုလာတဲ့ Huawei Honor Hol-U19 version 4.4.2 ကို မြန်​မာ​ဖောင့်​ထည့်​နည်းကိုတင်​​ပေးသွားပါမယ်
Honor Hol-U19 ကို​​ဖောင့်​ထည့်​ရင်​ myanmar font changer ​တွေသုံးပြီး​ဖောင့်​ထည့်​တဲ့အခါ မြန်​မာစာမှန်​သွား​သော်​လည်း ယပင့်​ကပ်​​နေတာကိုကြုံ​တွေ့ကြရမှာပါ အခြား​သော version 4.4.2 ရှိတဲ့ဖုန်း​တွေထက်​ကို သိသိသာသာ​လေးပိုကပ်​တာ​တွေ့ရပါတယ်​ ဒီနည်းလမ်း​လေးမှာ​တော့ ထိုယပင့်ကပ်တာကို လုံးဝအဆင်ပြေသွားအောင်ဖြေရှင်းပေးထားပါတယ်
ပထမဦးစွာ မြန်​မာ​ဖောင့်​ထည့်​​တော့မယ်​ဆိုရင်​ ဖုန်းကို root ​ဖောက်​ထားဖို့လိုပါတယ်​
Root ​ဖောက်​ဖို့က​တော့ iRoot PC Tool နဲ့​ဖောက်​ပါရပါတယ်​ မရှိရင်​​တော့ဒီမှာ​ဒေါင်းယူလိုက်​ပါ
Root Access ရရှိသွားပြီဆိုရင်​​တော့ မြန်​မာ​ဖောင့်​ထည့်​ဖို့အတွက်​​အောက်​ပါ​လေး​တွေလိုအပ်​ပါတယ်​ ​ဒေါင်းယူလိုက်​ပါ
Zawgyi One 2008.ttf
အားလုံးအဆင်​သင့်​ဖြစ်​ပြီဆိုရင်​​တော့ အရင်​ဆုံး busy box ကိုဝင်​လိုက်​ပါ install ကိုနှိပ်​​ပေးပြီးခဏ​စောင့်​​နေလိုက်​ပါ install ပြီးသွားပြီဆိုရင်​ ပြန်​ထွက်​လိုက်​ပါ
​Font Changer Lite ကိုဝင်​လိုက်​ပါ refreshing လုပ်​​နေပါလိမ့်​မယ်​ ခဏ​စောင့်​​ပေးလိုက်​ပါ ပြီးသွားပြီဆိုရင်​ပြန်​ထွက်​လိုက်​ပါ
Root Explorer ထဲသို့ဝင်​ပါ ​ဒေါင်းယူထားတဲ့ Zawgyi One 2008.ttf ကိုရှာပြီး copy ယူလိုက်​ပါ ပြီးလျှင်​ sd card သို့သွားပြီး font changer folder ကိုရှာလိုက်​ပါ ​တွေ့ပြီဆိုလျှင်​ font changer folder ထဲမှာ copy ယူလာတဲ့ Zawgyi One 2008.ttf ​ဖောင့်​ကို pasete ချ​ပေးလိုက်​ပါ ပြီးရင်​ပြန်​ထွက်​လိုက်​ပါ
Font Changer Lite ထဲသို့ပြန်​ဝင်​ပါ refreshing လုပ်​​နေတာကိုခဏ​စောင့်​လိုက်​ပါ ပြီးသွားရင်​ Zawgyi One 2008.ttf ​ဖောင့်​ကို​တွေ့ပါလိမ့်​မယ်​ Zawgyi One 2008.ttf ​ဖောင့်​ကိုနှိပ်​​ပေးလိုက်​ပါ box တစ်​ခုတက်​လာပါလိမ့်​မယ်​ တက်​လာတဲ့ box က apply ကိုနှိပ်​​ပေးပြီးခဏ​စောင့်​​နေလိုက်​ပါ ​ဖောင့်​ကိုထည့်​သွင်း​နေပါလိမ့်​မယ်​ ပြီးသွားရင်​ box တစ်​ခုတက်​လာပါလိမ့်​မယ်​ reboot now ကိုနှိပ်​​ပေးလိုက်​ပါ reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်
ပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော့မြန်မာစာရပါပြီ ဒါပေမယ့် Youtube နဲ့ Facebook မြန်မာနာမည်တွေမှာစာမမှန်သေးပါဘူး နောက်တစ်ဆင့်ဆက်လုပ်ရပါမယ်
Font Changer Lite ထဲသို့ပြန်ဝင်ပါ Advanced ကိုနှိပ်ပါ Padauk-book.ttf ကိုရှာပြီးနှိပ်လိုက်ပါ ပေါ်လာတဲ့ Zawgyi One 2008.ttf ကိုနှိပ်ပါ apply ကိုနှိပ်ပြီးခဏစောင့်ပါ တက်လာတဲ့ box က reboot later ကိုနှိပ်ပါ
Padauk-bookbold.ttf ကိုရှာပြီးနှိပ်လိုက်ပါ ပေါ်လာတဲ့ Zawgyi One 2008.ttf ကိုနှိပ်ပါ apply ကိုနှိပ်ပြီးခဏစောင့်ပါ တက်လာတဲ့ box က reboot now ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
ဖုန်း reboot ကျသွားပြီပြန်​တက်​လာပြီဆိုလျှင်​​တော့ Facebook မြန်မာနာမည်နှင့် Youtube မှာပါမြန်​မာစာမှန်​ကန်​​နေပြီး ယပင့်​လည်းမကပ်​​ပဲ လုံးဝကိုအဆင်​​ပြေသွားပါပြီခင်​ဗျာ
Zawgyi One 2008.ttf ကို​ရေး​ပေးခဲ့သူ ကိုအောင်သူရ နဲ့ သက်​ဆိုင်​ရာ software developer အားလုံးကို credit ​ပေးပါတယ်​
Posted by A Yan Lu at 3:16 AM 1 comment:
Labels: Myanmar Fonts
ROM : i-mobile i-style 2.1
ROM : i-mobile i-style 2.2
ROM : i-mobile i-style 2.4
ROM : i-mobile i-style 2.5
ROM : i-mobile i-style 2.6
ROM : i-mobile i-style 2.7
ROM : i-mobile i-style 2.9
ROM : i-mobile i-style 210
ROM : i-mobile i-style 212
ROM : i-mobile i-style 215
ROM : i-mobile i-style 3
ROM : i-mobile i-style 4
ROM : i-mobile i-style 5
ROM : i-mobile i-style 6
ROM : i-mobile i-style 7.1
ROM : i-mobile i-style 7.5
ROM : i-mobile i-style 7.6
ROM : i-mobile i-style 7.7 DTV
ROM : i-mobile i-style 7.7 DTV (2) Camera OV
ROM : i-mobile i-style 7.7 DTV (3) Toshiba Camera
ROM : i-mobile i-style 7.7 DTV (4) OVST Camera
ROM : i-mobile i-style 7.8 DTV
ROM : i-mobile i-style 710
ROM : i-mobile i-style 8
ROM : i-mobile i-style 8.1
ROM : i-mobile i-style 8.2
ROM : i-mobile i-style 8.3 DTV
รวม ROM ศูนย์ I-mobile
i-style 2.4 Official rom FT V12.rar (420M)
I Style 2.5 Rom ကိုဒေါင်းရန်
i-mobile_i-style_2.6A_T17_factory_update www.minminchit.org.rar (613M)
I Style 2.8 Firmware ကိုဒေါင်းရန်
I Mobile I Style6Firmware ကိုဒေါင်းရန်
imobile i style 7.1 firmware ကို ဒီမှာ ဒေါင်းပါခင်ဗျာ
i-STYLE 7.3 T09.rar (421M)
SW i-mobile i-STYLE 7.3 T09.rar
i-style 7.5 V.13.rar (428M)
i-style 7.6 Official rom V8 SPFLASH www.minminchit.org.rar (574M)
iSTYLE 8.1_L107 www.minminchit.org.rar (431M) exceeds the
STYLE8.1_L107 www.minminchit.org.rar (431M)
i-style_2.6A_T17_factory_update www.minminchit.org.rar (613M)
i-style Q3 S8073_MP_THAI_850_2100_V17.rar (339M)
I Style Q4 Rom ကိုဒေါင်းရန်
I Style IQ 5A Official rom Old HW V16.zip (363M)
IQ 2A ရဲ့ firmware ကိုဒေါင်းရန်
IQ5 V.13.rar (338M)
IQ5 Firmware ကိုဒေါင်းရန်
IQ5.1 T14 อัพผ่าน USB www.minminchit.org.rar (683M)
IQ 5.3 USB Driver ကိုဒေါင်းရန်
IQ 5.5 Firmware ကိုဒေါင်းရန်
IQ5A Official rom Old HW V16.zip (363M)
iQ6 V10 Rom ကိုဒေါင်းရန်
IQ 6.3 Firmware ဖိုင်းကိုဒေါင်းရန်
iQ9 usb driver ကိုဒေါင်းရန်
i-style 7.1 S7511B_MP_THAI_V7_running Download Firmware Click Here
ROM : i-mobile IQX Bliz
ROM : i-mobile IQ 1
ROM : i-mobile IQ 1.1
ROM : i-mobile IQ 1.1 A
ROM : i-mobile IQ 2
ROM : i-mobile IQ 3
ROM : i-mobile IQ 4
ROM : i-mobile IQ 5
IQ5A Official rom FT V16 for old hw only : https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMM2dWNHV4QVlrWDQ/edit?usp=sharing
สำหรับเครื่องที่เป็น S9083 เท่านั้น ถึงแม้จะสามารถแฟลชลงเครื่อง S9081 ได้แต่จะใช้งานกล้องไม่ได้ครับ ที่บอกเพราะมีคนแฟลชพลาดกันมาแล้ว
สำหรับ เครื่องที่เป็น S9083 เท่านั้น ถึงแม้จะสามารถแฟลชลงเครื่อง S9081 ได้แต่จะใช้งานกล้องไม่ได้ครับ ที่บอกเพราะมีคนแฟลชพลาดกันมาแล้ว
IQ5A 900/2100 http://www.4shared.com/rar/qFHqt8Kr/IQ5A_New_HW_S9083_MP_THAI_900_.html
IQ5 850/2100 https://docs.google.com/file/d/0B7V7eS44lBLeMFRub1VzS2lfWEE/edit
ROM : i-mobile IQ 5.1
ROM : i-mobile IQ5.1 Pro
ROM : i-mobile IQ 5.3
ROM : i-mobile IQ 5.6
ROM : i-mobile IQ 6
ROM : i-mobile IQ 6.1
SW IQ6.1 V08.rar (602M)
ROM : i-mobile IQ 9
ROM : i-mobile IQ 9.1
ROM : i-mobile IQX
ROM : i-mobile IQX A
ROM : i-mobile IQX2
ROM : i-mobile IQX3
ROM : i-STYLE Q2
Credit >>> All Original Uploader
Posted by A Yan Lu at 5:07 AM 30 comments:
Labels: Firmwares, i-mobile firmwares
OPPO FIND PIANO R8113 အတွက် CUSTOM ROM
Offical သုံးရတာငြီးငွေ့လာလို့ custom လေးပြောင်းသုံးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် custom rom လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
CUSROM FOR OPPO FIND PIANO R8113
Based on Android 4.2 very smooth, Just download, and install via CWM
Posted by A Yan Lu at 4:49 AM No comments:
Labels: CUSTOM ROM, Firmwares, OPPO FIRMWARES
OPPO R2001 OFFICAL FIRMWARE
OPPO R2001 အတွက် မြန်မာစာပါပြီးသား offical firmware ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Posted by A Yan Lu at 2:48 AM 1 comment:
(အဆင်ပြေသလိုသာ မွှေနှောက်သွားပေတော့ ဗျို့...)
Posted by A Yan Lu at 12:15 AM No comments:
Labels: Firmwares, HUAWEI FIRMWARES
GALAXY CORE2SM-G355H VERSION 4.4.2 THL ( OFFICAL...
GALAXY ACE3GT-S7270 အတွက် JetBean3ROM ( Custom...
NOKIA XL RM-1030 Firmware တင်နည်း
Clone Firmware များစုစည်းမှု့
Lenovo A369i (ROM) ပြန်တင်နည်း
Huawei Honor Holly Hol-U19 Version 4.4.2 ကိုမြန်​မ...